Mukhtaar Roobow (Abuu Mansuur) oo la soo Gaarsiiyay Magaalada Muqdisho (VIDEO)
Waxaa goor dhow oo galabta ah Garoonka Aadan Cadde ee Magaalada Muqdisho soo gaaray diyaarad gaar ah oo siday afhayeenkii hore ee ururka Al Shabaab Mukhtaar Roobow Cali (Abuu Mansuur), ka dib markii ay ka soo qaaday Magaalada Xudur ee Gobolka Bakool.
Mukhtaar Roobow ayaa waxa uu saakay soo gaaray Magaalada Xudur, kadib markii duleedka magaaladaasi ay ka soo gelbiyeen Ciidamada Gaarka ee Maamulka Koonfur Galbeed, oo garab ka helaya Ciidamada Dowladda iyo kuwa Nabad Ilaalinta Midowga Afrika.
Ka hor inta aan Mukhtaar Roobow loo soo duulin Magaalada Muqdisho ayaa wuxuu Magaalada Xudur kula kulmay Wasiirka Difaaca Soomaaliya, C/rashiid C/laahi Cali, waxaana kulankaasi ka soo baxay in ninkaasi loo soo duuliyo Magaalada Muqdisho.
Magaalada Muqdisho waxaa xiligan ku sugan Madaxweynaha Maamulka Koonfur Galbeed, Shariif Xasan Sheekh Aadan oo muhiim u ahaa wadahadalada la isugu soo dhaweeyay Dowladda Dhexe iyo Mukhtaar Roobow.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaa sheegaya in Madaxweynaha Koonfur Galbeed uu Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisal Wasaare Khayre ka codsaday inaanan Abuu Mansuur loola dhaqmin si lamid ah, sidii loola dhaqmay Xasan Daahir Aweys.
August 14, 2017 Geesey